Ajax, DOM, RSS, XHTML, SOAP ... waxyaalahaas oo dhan! Way ka fududdahay sidaad moodeysid! | Martech Zone
Talaado, Oktoobar 3, 2006 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Waa hagaag… kani waa suugaan bilaw ah oo blog ah oo loogu talagalay dhammaan wiilkayga saaxiibbadiis halkaas oo la yaaban waxa ay tahay inaan sameeyo maalinta oo dhan.
Waa maxay macnaheedu dhammaantood? Bannaan iyo fudud? Waxay ka dhigan tahay in nidaamkaagu la hadli karo nidaamkayga. Waxaan leenahay luuqad guud… waxaan kuhadalnaa hab maamuuska Hypertext (codkeena) iyo XML (ama kudhow… waa luuqadeena). Waa hagaag, maxay taasi macnaheedu tahay? Hagaag, waxay ka dhigan tahay waxaan kuu sheegayaa marka hore waxaan ka hadlayo ka dibna waan ka hadlayaa, iyo markaan dhameeyo ka hadalka waxaan kuu sheegayaa inaan dhammeeyay.
Waxaan dhahayaa magacayga koowaad.
Waan dhammeeyay magacaygii ugu horreeyay.
XML kani waa:
> magaca hore> Doug> / magaca koowaad>
Waxa ugu weyn ee ku saabsan XML ayaa ah inaan kuu soo diri karo wabiyada iyo durdurrada macluumaadka. Xitaa waxaan kuu soo diri karaa diiwaanno badan isla waqtigaas:
Dad baan kuu dirayaa.
Waxaan kuu soo dirayaa magac hore.
Waan dhammeeyey inaan kuu soo diro magac hore.
Waan dhammeeyay inaan dad kuu diro.
> magaca koowaad> Katie> / first_name>
> / dadka>
Marka… haddii aan ku hadli karo afkaaga… markaa waan wada hadli karnaa, sax? Xaqiiqdii! Tani waa sida ay u shaqeeyaan dhammaan teknoolojiyaddan. Waad geli kartaa Wikipedia oo dhammaantood waad eegi kartaa, laakiin waa wax iska cad oo fudud. Xaqiiqdii, waa sida aad u aqrinaysid gelitaanka blog-ka hadda. Waxaad gelisay cinwaankayga biraawsarkaaga biraawsarkaaguna wuxuu yidhi… hey, Douglaskarr.com, adigu ma joogtaa? Waxaan idhi haa! Waa tan HTML-kayga. Waadna ogeyd halka boggeygu ka bilaabmay kuna dhammaaday iyadoo lagu saleynayo astaamaha HTML-ka (HyperText Markup Language).
Haddii aan barnaamij u sameeyo doesn't macno malahan nooca nidaamka aad ku socoto ama aan ku jiro… waan ka wada hadli karnaa midkeenna dhib ma leh. Waan isticmaali karaa PHP oo waxaan lahadli karaa adeege socda Java, .NET, Perl, ASP… waxkasta. Cool, huh? Hubso inay tahay, c'mon!
Haddii aan abuuro barnaamij weyn oo aad rabto in nidaamkaagu ila hadlo aniga, waxaan dhisi doonaa API, ama Isdhexgalka Barnaamijka Barnaamijyada. Taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad iga codsato macluumaad… anna dib ayaan kuugu soo riixi doonaa adiga oo jooga XML. Dhawaaq adag? Maaha… waa sida Google u shaqeeyo! Fiiri cinwaanka ka dib markaad gujiso gudbinta:
Waxaan iri… haye Google, waxaan jeclaan lahaa inaan wax weyddiiyo nidaamkaaga (q) Douglas Karr. Halkaas ayaad tagaysaa… q = Douglas + Karr! Ka dibna Google wuxuu ku jawaabayaa farabadan HTML oo ah biraawsarkayga si uu i tuso. Haye, waxaan ahay # 1! Woohooo.
RSS aad ayey isugu egtahay. Balooggeygu wuxuu leeyahay quudin RSS ah oo kafeeraya dhammaan sawirada dheeraadka ah iyo qaabeynta oo kaliya ku tuura waxyaabaha ku jira halkaas si aad u aragto. RSS waxay u taagan tahay 'True Simple Syndication' k geek waxay u hadashaa waxyaabo badan oo XMLish ah. Hadda waxaan ku arki karaa barta 'Akhriste' '
Tani waa meesha isdhexgalka uu yahay mid cajiib ah. Waan gudbin karaa waxyaabaha, xogta, dhacdooyinka, macluumaadka, wada sheekaysiga ually waxkastoo la isticmaalayo XML. Luuqad kasta oo casri ah oo halkaa ka jirtaa waxay isticmaali kartaa XML (ereyga macaan waa… cuno XML) waxayna ku sameysaa iyadoo 'lafa gureysa' fariinta. Taasi macnaheedu waa uun in la kala jabiyo si ay u garan karto. SOAP waa hab kale oo looga gudbi karo XML gadaal iyo gadaal.
Ha i aaminin? Waa tan bogga ay la hadlayso: http://www.payraisecalculator.com/getPayraise.php. Ogeysiis ma jiraan wax qiimayaal dhab ah… taasi waa sababta oo ah dhab ahaantii waxba ma aanan dhejin. Laakiin waxaad ka helaysaa ujeedka.
Marka waxaas oo dhami maxay ka dhigan yihiin? Hagaag, RIA ayaa shabaqa qaadan doonta oo waxbadan ka fududayn doonta. Kuwa ka soo horjeedaa waxay ku qaylinayaan inay marwalba yeelan doonaan barnaamijyo sida Microsoft Word iyo Excel. Runtii? Ka warran Google Qoraal ahaan iyo barasantigareeyaan? Waxay ku dhowdahay dadka geeska.
Waxyaabaha layaabka leh ee tani waxay ahayd in 20 sano ka hor ay ahayd kobaca Computer-ka Shakhsiyeed ee aynaan u baahnayn in lagu xidho qaar ka mid ah 'nidaamka' Waa hagaag… bal qiyaas ?! Waxaan dib ugu soo noqonay shaxdii weynayd… waxaa jira koox badan oo iyaga ka mid ah oo shabaqa ku jira.